Afisy 14 NASA izay manonofy anao amin'ny dia an-habakabaka | Famoronana an-tserasera
Raiso avokoa ny peta-drindrina 14 avy amin'ny andian-tsary "Vision of the Future" NASA
NASA latsaky ny folo andro lasa izay "nomeny" peta-drindrina telo izy izay mandrisika ny fivezivezena eny an-habakabaka na izay farafaharatsiny manonofy ny amin'ny ho avy amin'ny zanak'olombelona. Ny afisy sasany mitovy amin'ny ny an'ny Space X ary izany dia manome lanja an'io fizahantany habakabaka io izay azo antoka fa afaka miditra amin'ny ho avy ny taranatsika.
Ary anio no anaovan'ny Te-haka fanahy anao ny NASA ho an'ireo fitsangatsanganana an-habakabaka ireo amin'ny afisy 14 amin'ny fitambarany izay hahafahanao mandeha amin'ny eritreritrao manerana an'i Eropa, iray amin'ny volana Jupiter, na hahaliana anao ny masoandro kambana amin'ny Kepler 16b. Avy eo, azonao atao ny misintona ny afisy efatra ambin'ny folo amin'ireo poster izay ahafahanao manohy manonofy andro iray hahatratra ireo kintana.
Ka raha efa naniry ianao Mizaha ny ranomasina metana misy ranomandry an'i Titan na manidina eo ambanin'ny tanjaky ny planeta HD 40307 g ao amin'ny antokon-kintana, izay azo antoka fa miaraka amin'ny afisy izay zarainay avy amin'ny NASA, ianao dia ho afaka hanome fahafaham-po amin'ny ampahany izany faniriana izany.
Mitohy ireo afisy ireo avy amin'ny andiam-panadihadiana Bureau of Travel izay noforonin'ny studio famolavolana JPL tamin'ny taon-dasa. Ny fandinihana dia manampy ny mpahay siansa sy ny injeniera handamina iraka ho avy, izay midika fa eo an-tampon'ny hevitra farany sy lehibe indrindra mipoitra avy amin'ny laboratoara izy ireo.
Rehefa nangatahan'ny NASA hamorona afisy vaovao ho an'ny andiany izy ireo dia afaka ampidiro ny sasany amin'ireo hevitra napetrak'ilay masoivoho mikasa ny ho avy izy, toy ireo tanàna mitsingevana ao Venus.
Na dia mbola mbola be ny sisa tavela Ka miaraka amintsika ireo sary an-tsaina sy ireo eritreritra rehetra amin'ny ho avy dia tsy mampaninona mihitsy ny manonofinofy sy maka sary an-tsaina ny tsirairay amin'ireo afisy manana kalitao lehibe ao amin'ilay fanoharana.
Sintomy ny afisy 14 an'ny NASA
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Raiso avokoa ny peta-drindrina 14 avy amin'ny andian-tsary "Vision of the Future" NASA
Ireo cookies voaravaka nohafaran'i Aaron Paul ho an'ny premiere Triple Nine